Kutaurirana naJo Nesbø muBarcelona. Kosmópolis, _La sed_, Harry Hole uye zvimwe zvakawanda | Zvazvino Zvinyorwa
Kutaurirana naJo Nesbø muBarcelona. Kosmopolis, _La sed_, Harry Hole uye nezvimwe zvakawanda
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Zviitiko, Nhema nhema
Mufananidzo wekumashure: © Thron Ullberg
Ndizvozvo. Isu taive (ini mumweya asi nechido chakaenzana) na Jo Nesbø Mugovera uno wapfuura mu Barcelona. Panguva yechiitiko chekushanya kwako ku Kosmopolis, munyori weNorway akapindawo mu kusangana nevaverengi vako iyo yakarongeka kuburikidza nemakwikwi peji remuparidzi iro rinoburitsa mabhuku ake kuSpain.
Kutenda kwangu kukuru kuna Isabel de la Mora, uyo ane nhoroondo yake uye pamwe chete naHilda Pérez naAraceli Ferrer, vashandi kubva Akabatwa naJo Nesbø, vakaita kuti chinyorwa ichi chikwanisike. Ini ndinorondedzera izvo Nesbø akaudza mune yakasununguka uye yepedyo toni yemuverengi / munyori. Uye ini ndinopedzisira nepfupi ongorora de Nyota iyo, sezvandaitarisira, yakagara mazuva maviri. Naizvozvi ini ndinopedza kupera chaiko kweNesbø kwemwedzi. Zviya, bhavhadhe rinofadza nhasi, mudzidzisi. Ita iyo imwe makumi mashanu nenomwe.
2 Nevaverengi vako
2.1 Harry Hole, vamwe vanhu, kushoropodzwa kwezvematongerwo enyika uye vezvenhau
2.2 Macbeth uye The Snowman
2.3 Maitiro ako ekushanda
NeMugovera 25 Jo Nesbø akakokwa Kosmopolis yemusangano ne Marc Mufundisi. Nemunyori wechiCatalan aive kutaura nekupindura mibvunzo. TV dzino Kubatikana, one dystopia, yaari iye musoro wekufunga, yaive imwe yemadimikira achitaura nezve shanduko yemamiriro ekunze mabhuku. Asi Nesbø akatsanangura kuti nhepfenyuro idzi dzakadzika nzira dzekudzosera kutya nyika diki (Norway) yekupindwa nemuvengi akasimba (Russia). Mamiriro ezvinhu asinganzwisisike tisingazive zvakapfuura zveNorway.
Vakataurawo nezvazvo Nyota kubva a maonero pakati pevanyori yakatsaurirwa kune imwecheteyo genre. Pastor, se tsotsi, akabata nhamba dzematsotsi ichienzanisa Norway (mamirioni mashanu vagari) neCatalonia (ine vanomwe). Uye ivo vakaona kuti Catalonia, gore negore, yakapfuura zvakanyanya huwandu hwematsotsi munyika yeNordic. Nesbo akaseka kuti aya ndiwo maratidziro aaiita zvirinani mumufananidzo weavo manhamba.
Mifananidzo na @kosmopolisCCCB uye @JLEspina. Via Twitter.
Asi pamberi pemusangano Nesbø aive mu Ini ndinowana zvakawanda zvisina kurongwa nevaverengi vane rombo rakanaka avo vakakwanisa kubvunza mibvunzo yakati wandei. Izvi ndizvo zvaakavaudza.
Harry Hole, vamwe vanhu, kushoropodzwa kwezvematongerwo enyika uye vezvenhau
ari mamwe mafungiro ako uye zvinzvimbo weNesbø akaonekwa zvakanyanya uye zvakanyanya mumanyorero ake. Vhura Nyota kunyanya semuenzaniso pane yakakura kudzokorora kunzira yekushanda kweiyo zvinoreva. ari sensationalism uye chero chinhu chinoenda zvinoratidzika zvakanaka kuratidzwa. Hezvino zviri mune hunhu hwe mutori venhau asingazeze kutora njodzi kune chero chinhu kuti uwane bhomba reruzivo pane iyo lurid kesi iri kuongororwa.
La huori hwezvematongerwo enyika ndeimwe yemitambo yake inogara ichingoitika yatove mumazita apfuura eiyo Harry Hole akateedzana. Nehunyanzvi anozvigadzirisa mumwe weavo vasina hunhu uye vanodisisa mavara asina miganho inoburitsa kurambwa nekuyemurwa. Mukuru wemapurisa Michael Bellman Iyo haina kuyerwa mukugadzirwa kwayo uye inoratidza zvakare pasina tsitsi chii chingaitwe kuti uwane simba.
About Wiki Harry hole chatinonyanya kufarira pano ndecako kuoma kuoma pakati petsika dzetsika zvaunonzwa kumhuri yako uye basa rezvemagariro akananga kubasa kwake. Zvakare, seku Mapurisa, Anoenderera mberi achinzwa kufara uye kuti kune mumwe munhu akaita saHole zvinonetsa kufunga nekutakura. Nesbø akasimbisa izvozvo mufaro unomutyisa uye anogara aine kusava nechokwadi nezvekuti unoichengeta sei kana kuti ichagara kwenguva yakareba sei. Kana, sekuzivikanwa kwazvo, zvinotora nguva yakareba sei kuti azvipambe saka havazvikanganisi. Uye ino nguva anozviongorora chaizvo.
Ivo vakamubvunzawo nezveumwe hunhu hunosuwa vaverengi Søs Hole, Hanzvadzi yaHarry. Nesbø akapindura kuti Søs ane kuwanda kwepfungwa iyo yakatora nzvimbo kubva kuna Harry, mupfungwa yekuti zvingave zvakanyanyisa kwatiri tese. Uye akafunga kumuisa parutivi mumabhuku ekupedzisira.
Akataura zvakare nezvekuti dzimwe nguva sei haigone "kudzora" hunhu kushanduka. Aya ndiwo maitiro aakaudza nyaya yeimwe yeinonakidza kwazvo yaakasika, Truls Berntsen, iyo grey uye inokambaira muchinjikwa yemari iyo iye naMikael Bellman. Kudonhera kwake mugehena mukati memazita mashoma apfuura kwaigona kungoreva kuregererwa. Uye Nesbø akareurura pachena kuti anga asina kufanoona kutendeuka uku asi kwaive iko.
Mufananidzo nerubatsiro rwaIsabel de la Mora. Ndatenda zvikuru nekuda kwechinyorwa.
Macbeth uye The Snowman
La shanduro ye Macbeth kwekutanga Hogarth anozunungusa Sezviri pachena yatove nemapeji mazana mashanu ayo asati apedza. Zvakarongerwa 2018. Iyo vhezheni akasununguka kwazvo yekutamba kwaShakespeare. Nesbø anoisa vanonyanya kutaurwa muguta reEurope munguva yakaipisisa yeiyo 70s. Uye hakuna machinda kana madzimambo, asi SWAT uye mupurisa wekumusoro kurwira chigaro chemukuru wemapurisa anenge ava kuenda pamudyandigere.
About Wiki Iye Snowman havana kuzviona vachida zvikuru. Akadaro Ini ndakanga ndisina kutora chikamu mune chinyorwa kana musarudzo yevatambi. Ini ndakanga ndisati ndaona chero chinhu muvhi (kunyangwe iine Cameo). Uye pavakamuudza kuti havana kuona Michael Fassbender zvakanyanya saHarry Hole, akaseka zvekurangana ndokuti kusvika sekuziva kwake, ngatirege kutarisira kuti bhaisikopo riite kunge bhuku racho. Uye achidzokera kuShakespeare akataura kuti sezvo basa rake risina kuremekedzwa zvakanyanya, akaita zvimwe chete neizvo zvechirungu bard kunyangwe hazvo achichengetedza madaro Zvisinei, tichaona muna Gumiguru.
Maitiro ako ekushanda
Chii chekunyora nezvazvo 5 kana 6 mapeji nechinyorwa chidiki y Mwedzi mitanhatu yekutsvaga, zvinyorwa, chimiro uye zvese zvakajeka (tanga uye pedzisa). Kana ichinyatsodzika kuchitsauko chekutanga inenge iine zano uye kunyangwe imwe nhaurirano diki Anoshandisa sosi iyi kutora mavara kwaanoda.
Chinhu chakanyanya kukosha: icho chitsauko chekutanga chinobuda chakatenderera nekuti nenzira iyoyo mune yechipiri unogona kukanganisa. Uye achitarisa kumashure akarangarira iyo kukundikana izvo zvandaive nazvo pamusoro pezvose neracord pavakangotarisa mabasa ake. Zvino, nevashanu vapepeti, zvinhu zvachinja zvakanyanya.
Ini ndichaganhurira ini kune yangu maonero: imwe novel denderedzwa uye kupenya. Mamiriro anotsausa, zvivharo, mhedzisiro isingapedze, zvakakosha kutyisa uye zviitiko zvisingatarisirwi kana zvinoshamisa, uye macabre scenes brand yeimba. En Mbada isu taive neapuro inotapira yaLeopold, pano, inotyisa meno esimbi. Saka ropa kwese kwese. Asi zvakare, pamwe kugadzira Macbeth, kune mutero kuna Shakespeare mumufananidzo we Othello, sezvo godo rine basa rakakosha mune iyi nyowani nyaya. Uye mutongo wekupedzisira uyo ... Zvisinei, izvo kuchave nekuwanda Harry. Parizvino
Zvisinei, imwe shasha kubva kuna tenzi weOslo. "Tinokuda, Harry"muvengi wake ane simba akambomuudza. Uye kana achichida, isu zvakanyanya. Kuti uenderere mberi nekunakidzwa neHole bullion. Zvinyorwa zvake zvekunyora hazvikanganwike zvachose. Ini zvechokwadi handinete navo.
Uye sekupedzisira scoop: zvinokwanisika kuti Nesbø ndiye in the Book Fair muMadrid gore rinouya. Yakanga iri nguva yekudzoka kwake kubani repakati. Kubva nhasi ndatove nemaoko maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Kutaurirana naJo Nesbø muBarcelona. Kosmopolis, _La sed_, Harry Hole uye nezvimwe zvakawanda
Ini ndakangokanganwa kunyora muchinyorwa hukama hwakakosha hwaanahwo na "Robin"; kwatiri isu Nesbø wedu wekutanga, kwaari mutero kuna baba vake.
Hongu, asi usazvidya moyo. Zvakaitika kwandiriwo. Uye ini ndasiyawo zvamakataura nezvazvo Vanotsvaga. Asi uya, zvese zvinonyanya kukosha.
Runyerekupe rwevakafa, inovhundutsa bhuku raEnrique Laso
Makore 75 apfuura Miguel Hernández akafa